समाचार Archives - अन्नपूर्ण टाइम्स
काठमाडौं - सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । अर्बौको आर्थिक चलखेर गरेर सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पनि व्यापारीको हातमा दिने तयारी गरिरहेको भन्दै पौडेलले गम्भीर आरोप लगाएका हुन् । नेपाल आयल निगम व्यापारीको हातमा दिएर अर्बौँ कमाएर राजा...
विराटनगर - सरकारी सहीछाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएकी नेकपा एमाले सांसद गुलेफुन खातुनले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । नेकपा एमालेबाट प्रदेश १ की समानुपातिक सांसद खातुनले राजीनामा दिएकी हुन् । उनले दिएको राजीनामा पत्र बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले वाचन गरेर सुनाए । राजीनामा पत्र बाचन...
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसले एक्लै चुनावमा जाँदा पनि कमजोर नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजक रहेको स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएकामध्ये ५२ प्रतिशतमा निर्वाचन जितेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा एक्लै चुनावमा जाँदा पनि कमजोर नदेखिएको निष्कर्ष...
काठमाडौं - प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल जेठ २५ बाट कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् । उनले मागेको बिदा आईजीपी धिरज प्रताप सिंहले दोस्रोपटक अस्वीकृत गरे । जेठ २५ बाट गैर हाजिर भएका पोखरेललाई काममा फर्किन प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुरोध गरेको छ । तर, उनी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुङ्गो नलागुन्जेल...
काठमाडौं - आन्तरिक विवादका कारण जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुट्ने निश्चित भएको छ । डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जसपा आन्तरिक विवादका कारण फुट्ने निश्चित भएको हो । लामो समयदेखि पार्टीभित्र भएको विवादलाई अन्त्य गर्न नसक्दा जसपा फुट्ने भएको हो । पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीको विषयमा पनि...
बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु बीच पूर्वसहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व फेर्न कसरत सुरु भएको हो । गत कात्तिक ११ गते गठबन्धनबाट सत्तारोहण गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे र नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँबीच आधाआधा समय सरकारको...
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीका अध्यक्ष वामदेव गौतमबीच भेटवार्ता भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गौतम ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । वामपन्थी एकताको अभियान सञ्चालन गर्ने भनेका गौतमले ओलीसँग भेट्न बुधबारै समय लिएका थिए । बालकोट पुगेका गौतमलाई ओलीले...
अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले वासिङ्टन डिसीस्थित नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीको अवलोकन गरेका छन् । स्थानीय समयअनुसार उनले बुधबार उक्त युनिभर्सिटीको अवलोकन गरेका हुन् । युनिभर्सिटीको भ्रमणको क्रममा प्रधानसेनापति शर्माले नेशनल वार कलेजका कमाण्डाण्ट जेफ हर्लबर्टसँग भेटवार्ता गरेका थिए । वासिङ्टनमा उनले एनडब्लुसी, नियर इस्ट साउथ एसिया सेन्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडीज्...
सकियो ओली-वामदेव भेटवार्ता, के–के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं - नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीका अध्यक्ष वामदेव गौतमबीच भेटवार्ता भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गौतम ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । वामपन्थी एकताको अभियान सञ्चालन गर्ने भनेका गौतमले ओलीसँग भेट्न बुधबारै समय लिएका थिए । बालकोट पुगेका...
एमाले नेता रामवीर निवास किन पुगे बालेन ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच भेटवार्ता भएको छ । मानन्धर निवासमा बालाजु बाइवास पुगेर बालेनले भेट गरेका हुन्। आफ्ना साथी कुमार बे सहित पूर्वमन्त्री मानन्धरलाई भेट्न बालेन निवासमा पुगेका थिए । उनीहरू दुई घण्टा भेटवार्ता चलेको थियो। ...